That's so good, right?: December 2009
ဖိုးဒင်တို့ရွာ (အပိုင်း - ၃)
` ပူလိုက်တာဗျာ....´ ဖိုးဒင်တောင် ပြန်ရောက်လာပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း ဘာငါးမှန်းမသိတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ပါလာသည်။
` ဟုတ်တယ်ကွ...ဒီနေ့ ပိုပူတယ်...´ ဖိုးဒင်က ကျွန်တော့်ဘေးနားကို ၀င်ထိုင်သည်။ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့ မျက်နှာမှာ။ စူးရှတဲ့ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းကို
ဖိုးဒင်ဆီကရလိုက်သည်။ လေပွေရိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခု က အိမ်ရှေ့က သစ်ရွက်ခြောက်လေးတွေကို ပွေ့ပိုက်ကာ သိမ်းပိုက်သွားသည်။ အလင်းရောင်က ပုဇွန်ဆီရောင်
ဖျော့ဖျော့။ အခုမှပဲ ညနေဆည်းဆာကို သေချာတွေ့ရတော့သည်။
` အစ်ကို...ခဏထိုင်ဦး...ငါထမင်းဟင်းချက်ပြီးရင် စားလို့ရပြီ..´
` မဆာသေးပါဘူးကွ...ဖိုးဒင်ခဏနားအုံးပေါ့...အခုမှပြန်လာတာ...´ ဖိုးဒင်က မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီးပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်လိုက်သည်။ အပြာရောင်ရင့်ရင့်ပုဆိုးက
တကယ့်ကို ဟောင်းနွမ်းနေလေပြီ။ ကျွန်တော် မပြန်ခင် ဖိုးဒင်ကို အ၀တ်အစားဝယ်ပေးအုံးမည်။
` ထမင်းအိုးကျက်ဖို့စောင့်ရအုံးမယ်လေ...အစ်ကို့ဖာသာ စာဖတ်နေပါ...ကျွန်တော်ချက်ပြီးကျက်ရင်ခေါ်လိုက်မယ်...´ နှီးနဲ့ချည်ထားတဲ့ငါးကိုပါတစ်ပါတည်း
ယူသွားသည်။ ကျွန်တော်ဖတ်လက်စ စာအုပ်ထဲတွင် အာရုံနစ်နေလိုက်သည်။တအောင့်ကြာတော့
` မောင်ရင်...ဘာစာတွေဖတ်နေတာတုန်း´ ဦးတုတ်ကြီးက ရေထပ်ချိုးလိုက်လို့လားမသိ။ နည်းနည်းတော့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားသလိုပင်။
` ဦးလေး...ထန်းတောမသွားဘူးလား...´ ခပ်တိုတိုဝတ်ထားသော ပုဆိုးကိုမှအားမနာဘဲ ဒူးကို ထောင်ပြီးအားရပါးရထိုင်သည်။ ပုဆိုးစအောက်က လွတ်သွားသော
မည်းနက်ပြီးပျော့နေတဲ့ လီးကြီးကို ထပ်တွေ့လိုက်ရသည်။
` ဒီနေ့မသွားတော့ပါဘူး...ထန်းရည်ထက်ကောင်းတဲ့အရာကို ဦးတွေ့သွားပြီ...´ ပုဆိုးကြားကိုကြည့်လိုက်တော့ ဦးတုတ်ရဲ့ ပစ္စည်းက အနည်းငယ်လှုပ်သွားသလို
` နေ့တိုင်းသောက်တာမကောင်းပါဘူးဦးရယ်...လျော့သောက်ပေါ့...´ ကျွန်တော် စကားကို လွဲလိုက်သည်။
` ဒီနေ့လို...နေ့တိုင်းမဟုတ်တောင် ရက်ခြားလောက်ဖြစ်ရင်တော့ သောက်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာ...´ ကျွန်တော်မပြောလို့မဖြစ်တော့။ တော်ကြာထမင်းဝိုင်းမှာ
ပြောလို့ ဖိုးဒင်က မေးရင်မလွယ်။
` ပြောလေ...´ ကျွန်တော်က ဦးတုတ်နားကို ကပ်သွားပြီး
` ဒီအကြောင်းတွေကို ထပ်မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ...ဖိုးဒင်သိသွားရင် မကောင်းဘူး...´ ဦးတုတ်က အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ညစ်တစ်တစ်ရီလိုက်သည်။ ပြောင်စပြုနေပြီ
ဖြစ်တဲ့နှဖူးပေါ်က ဆံပင်ပါးပါးလေးတွေက လေအတိုင်မှာ ဦးတုတ်ရဲ့နှဖူးကို ပိုပြီးပြောင်သွားစေသည်။
` အေးပါကွ...မောင်ရင်သာ...ဦးကို ဒီနေ့ကလို အလိုက်သိရင် မပြောပါဘူး....´ ဦးတုတ်က လီးသာတုတ်သာမဟုတ်။ လူကိုလည်းအပြီချုပ်တတ်သည်။ ဒါလား...
တောသားဆိုတာ။ ဦးတုတ်ရဲ့စကားတွေက ရင်တွေခုန်စေတာတော့အမှန်။
` ကဲ...မောင်ရင် ဖတ်စရာရှိဆက်ဖတ်နေ...ဦးနောက်ဖေးဝင်ပြီးထမင်းအိုးသွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်...´
` ဟုတ်ကဲ့....´ ဦးတုတ်က ဖိုးဒင် အဖေဆိုတာ ပြောလို့သာယုံရသည်။ ဖိုးဒင်နဲ့ တစက်မှမတူ။ အရပ်အမောင်းကော...ရုပ်ရည်ကော။ ဖိုးဒင်က သူ့အမေနဲ့တူပုံရ
သည်။ ကောင်းကင်ကြီးက မှောင်ရိပ်သန်းလာသည်။ ပုဇွန်ဆီရောင်မရှိတော့ဘဲ ညိုမှောင်းလာသည်။ လေအဝှေ့မှာ ခြံရှေ့နားမှာ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ ပန်းတမျိုးရဲ့ အနံ့ကို ကျွန်တော်
ရလိုက်သည်။ လေးအေးအေး ထဲတွင် မွေးပျံလာသည်။ သည်လို နေ၀င်ချိန်ဆည်းဆာက လူကို နူးညံ့သွားစေသည်။ လွမ်းဆွေးသွားစေသည်။ ဒီရွာမှာ အင်တာနက်မရှိ။ မီးမရှိ။
သို့ပေမယ့် မြို့ပြရဲ့ မီးမလာတဲ့အချိန် ဓာတ်ဆီအနံ့တွေရယ်၊ မီးစက်သံတဒုန်းဒုန်းတွေရယ်၊ စက်က ထွက်တဲ့မီးခိုးနံ့ပြင်းပြင်းတွေထက်တော့ အဆပေါင်းများစွာသာသည်။ ပူအိုက်ပေမယ့်
လေအေးပေးစက်မလို။ ဘယ်ကနေဘယ်လို အရပ်မျက်နှာမျိုးစုံက တိုက်တဲ့ အောက်စီဂျင်အပြည့်ပါတဲ့ လေနုအေးလေးတွေက တကယ့်ကိုအေးချမ်းစေသည်။ ဒီရွာကလေးကို ကျွန်တော်
` အစ်ကို...ထမင်းစားလို့ရပြီ...´ ဖိုးဒင်က အိပ်ထဲကနေလှမ်းခေါ်သည်။ စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်သည်။ ညက မှောင်ရီဝိုးတ၀ါးဖြစ်လာသည်။
အိမ်ခန်းထဲက မီးအိမ်လေးက သူ့ဟာနဲ့သူ အစွမ်းကုန်ထွန်းလင်းနေသည်။ စားပွဲဝိုင်းလေးမှာ ဖိုးဒင်က ကျကျနနပြင်ထားသည်။ ဖိုးဒင်ယူလာသော ငါးလေးကို ဆီကျန်ရေကျန်အစပ်ချက်
ထားသည်။ ငါးဟင်းပူပူပေါ်တွင် နံနံပင်လေးအုပ်ထားသဖြင့် ငါးဟင်းလေးမှာ မစားခင်ကတည်းက နံနံပင်အနံ့လေးမွေးပျံ့နေသည်။ ငါးပိရည်နဲ့ တို့စရာက တခွက်။ နောက် ပဲကြီးကို ဟင်း
ရည်ချက်ထားသေးသည်။ ပဲကြီးဟင်းရည်ပေါ်အုပ်ထားသော ဆူးပုပ်ရွက်၏ အနံ့ကလည်း တမျိုးတဖုံ ထမင်းစားချင်စိတ်ကို တဖွားဖွားပေါ်စေသည်။
` ဟား....မွေးနေတာပဲ...ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ...´ ဖိုးဒင် ကလက်ဆေးဇလုံလေးပေးသည်။ ဆပ်ပြာနှင့်ဆေးပုံမပေါ်။ ဦးတုတ်ကြီးကတော့ စားတောင်နေပြီ။ ငါးပိရည်နဲ့
အားရပါးရနယ်ဖတ်စားသည်မှာ ကြည့်နေတာနဲ့တင် ဗိုက်ဆာလာသည်။
` စား....မောင်ရင်...ထည့်စား...ငါ့သားက ဟင်းချက်တော်တယ်...´
` ဒီတိုင်းပါပဲဗျာ...ကျွန်တော့်ချက်တတ်သလိုချက်ထားတာ....မသိရင် အေးမြကိုမေးတယ်လေ...´ ဖိုးဒင်ကို ကျွန်တော် ပြုံးပြလိုက်သည်။ မီးရောင်အောက်မှာ ဖိုးဒင်ရဲ့
မေးရိုးတွေက ထင်းနေသည်။ ယောကျာ်းပီသတဲ့မေးရိုးတွေ နှာတံမြင့်မြင့်တွေကို ဖိုးဒင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဖိုးဒင်ကို ကြည့်လေ...ဦးတုတ်နဲ့ဘယ်လိုမှမတူလေ။ ဖိုးဒင်ချက်တဲ့လက်ရာက
အေးမြ လက်ရာကိုမှီသည်။ တို့စရာအစုံနှင့်ငါးပိရည်ကလည်း တကယ့်ကို ထမင်းမြိန်စေသည်။
` အရမ်းကိုစားကောင်းတယ်....အေးမြ ချက်တာနဲ့တောင်စားကောင်းသေးတယ်...´
` ဟာ...အစ်ကိုကလည်း....အေးမြက ပိုကောင်းတာ...´ ဖိုးဒင်က ရိုးရိုးသားသားပြောပေမယ့် ဦးတုတ်က တချက်ဟက်ခနဲရီလိုက်သည်။
` ကဲ...ငါ ရေနွေးကြမ်းသွားသောက်လိုက်အုံးမယ်...´ ဦးတုတ်ကြီးက စားပြီးသွားလို့ ထသွားသည်။ ကျွန်တော်လည်းလက်စသက်ပြီး ထမင်းပန်းကန်တွေကို နောက်ဖေး
ကိုသယ်သွားလိုက်သည်။ ဖိုးဒင်က သူလုပ်မယ်ပြောပေမယ့် ကျွန်တော်ပဲ နောက်ဖေးမှာ ဆီမီးလေးယူပြီး ပန်းကန်းတွေသွားဆေးလိုက်သည်။ နောက်ဖေးတွင် လေတချက်တိုက်လိုက်တိုင်း
` အစ်ကို ကလည်းဗျာ...ငါဆေးပါ့မယ်...သွား...အိမ်ရှေ့မှာ အကြမ်းသွားသောက်ချည်´
` ရပါတယ်ကွ...ဖိုးဒင်က ချက်လည်းချက် ဆေးလည်းဆေးဆိုပင်ပန်းမှာပေ့ါ...´
` ငါ လုပ်နေကျပါ....´
` ကဲ...ထားခဲ့...အစ်ကိုဆေးပြီး ထွက်လာခဲ့မယ်...ဖိုးဒင်လည်းနားပြီးရေမိုးချိုးတော့...မိုးချုပ်နေပြီ...´
` အစ်ကို...ကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်...အစ်ကိုသာ အေးမြဖြစ်ရင် ကောင်းမှာပဲ...´
`အစ်ကို...´ ဖိုးဒင်က အသံတိုးလိုက်ပြီးကျွန်တော့်နားကပ်ပြောသည်။
` ဒီည...အစ်ကို အေးမြ ဟန်ဆောင်ပေးရမယ်...မမေ့နဲ့နော်...´
` ဟာ....နောက်နေ့မှ....´ ဒီနေ့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့။ ချယ်ရီပေါက်လေး တခုလုံးကျိန်းစပ်နေသေးသည်။
` မရဘူး....ဒီနေ့ပဲ...မနေ့ညက ကတိပေးထားတယ်လေ...´ ကျွန်တော့်နားအတင်းကပ်ပြောသဖြင့် ဖိုးဒင်ရဲ့ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းကနှာခေါင်းထဲ စူးခနဲဝင်ရောက်လာသည်။
` ဟာ...အဖေက မိုးကြိုးပစ်တာတောင်မနိုးပါဘူးဆို...´ မနိုးလို့ပဲ ကျွန်တော်နဲ့ဖိုးဒင်ပြောတာတွေအကုန်ကြားတာမဟုတ်လား။
` မနေ့ကဘဲ....ဖိုးဒင် ထုထားတယ်လေ...ဒီနေ့တော့ အားယူလိုက်အုံး...မနက်ဖြန်...တကယ်ကတိပေးတယ်...´
` နမ်းတာလောက်တော့ ကျွန်တော်လည်းနမ်းတတ်ပါတယ်...´
` မဟုတ်ဘူးကွ....ပြင်သစ်အနမ်း...နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းတာ...´ ဖိုးဒင်က အနားပိုကပ်လာသည်။
` ထူးခြားလို့သင်ပေးတာပေ့ါ...ကဲ...တအောင့်နေ ရေသွားချိုး....သွားပါသေချာတိုက်ထား...´
` အေးပါကွ....´ ဖိုးဒင်က ခုန်ပေါက်ပြီးအိမ်ရှေ့ကိုထွက်သွားသည်။ ကလေးစိတ်လည်းကုန်သေးပုံမပေါ်။ မဟူရာကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ လခြမ်းလေးက ကွေးကွေး
လေးလင်းနေသည်။ ကြယ်တွေတော့ ကောင်းကောင်းမတွေ့သေး။ ရန်ကုန်မှာဒီအချိန်ဆို Gtalk မှာ chat နေလောက်ပြီ။ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက အမြဲတမ်းစကားတွေပြောဖြစ်တဲ့ ဘလက်ဒရိုဂျန်(blacktrojan)
ကိုသတိရသည်။ ချစ်လို့ခေါ်ခွင့်ရှိပေမယ့် အထင်လွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော့်ကို blocked လိုက်သည်။ သူနဲ့စကားပြောရတာကို ကျွန်တော်ပျော်သည်။ ဘ၀အမောတွေကို ခေတ္တမေ့သွားသည်။
အိမ်နောက်ဖေးရဲ့ဒေါင့်လေးမှာ အသီးတွေပြွတ်နေတဲ့သဘောင်္ပင်လေးကို အခုမှသတိထားမိသွားသည်။ ချစ် (ဘလက်ဒရိုဂျန်)က သဘောင်္ဖျော်ရည်အရမ်းကြိုက်သည်။ အနက်ရောင်ကြိုက်သည်။
ဘောင်းဘီဆိုရင် skinny ကြိုက်သည်။ ကတုံးလေးလည်းတုံးထားသည်။ webcam နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ချစ်ပုံလေးမှာ ချစ်ရဲ့ အောက်နှာခမ်းလေးက အိတွဲတွဲလေးဖြစ်နေသည်။ ခေါင်းလေးကို ငုံပြီး တခုခုကို ကြည့်
နေတဲ့ပုံစံလေး။ ကိုယ်မှန်တာကို ဖြေရှင်းချက်မထုတ်ချင်တော့လည်း နားလည်မှုလွဲမှားတာကို အဲ့ဒီ့အတိုင်းကျွန်တော်ထားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာပဲပြောပြော အင်တာနက်ထဲက ကျွန်တော့် ချစ် လို့ခေါ်ခဲ့သော
အမြဲလိုလို စကားတွေအကြာကြီးပြောဖြစ်တဲ့ ချစ်ကို သတိတရရှိနေသည်။ လွမ်းမိနေသည်။
ဖိုးဒင်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ ဦးတုတ်ကြီးရယ် အိမ်ရှေ့က ကွပ်ပျစ်လေးမှာ ရောက်တက်ရာရာစကားတွေပြောတာ တော်တော်ကြာသွားသည်ထင်။ ဦးတုတ်ကြီးက မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး
` သားတို့မအိပ်သေးဘူးလား...အဖေတော့သွားအိပ်တော့မယ်...´ ဖိုးဒင်က ကျွန်တော့်ကို တချက်ကြည့်လိုက်သည်။ လရောင်ကြောင့်သာ ၀ိုးတိုးဝါးတား မြင်လိုက်ရသည်။ ဘာကို
ဆိုလိုမှန်းကျွန်တော်မသိ။ နေ့လည်က ပင်ပန်းထားလို့ကျွန်တော်ပါ တကယ့်ကို အိပ်ချင်နေသည်။
` ဟုတ်ကဲ့...ကျွန်တော် အိပ်တော့မယ်...´
` ဟာ...အစ်ကိုကလည်း အစောကြီးရှိသေးတယ်...´ ဖိုးဒင်က သူ့အဖေ အိပ်တာကို စောင့်နေပုံရသည်။
` ဘယ်ကစောရမှာလည်း...မောင်ရင်က မနက်ဖြန်စာသွားသင်ရအုံးမှာ...အိပ်ရေးဝမှ ခေါင်းကြည်မှာပေါ့...´ ဦးတုတ်ကြီးက ပုဆိုးကို ဖြန့်ဝတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်က ထိုင်ရမှာထ
` ကဲ...ဒါဆို..ငါလည်းအိပ်တော့မယ်...´ ဦးတုတ်က ဦးဆောင်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ဖျာနှစ်ချပ်ကို ဦးတုတ်ကပဲခင်းလိုက်သည်။
` လာ...မောင်ရင်...ဒီဘက်ဒေါင့်မှာအိပ်...ထရံကလေတိုက်တော့ အေးအေးလေးနဲ့အိပ်လို့ကောင်းတယ်...´ ဖိုးဒင်က ချက်ချင်းပဲ
` ဟာ..အဖေကလည်း...မနေ့က အစ်ကိုအလယ်မှာအိပ်တာ...´
` ဟ...မနေ့က ငါကမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားလို့...ထရံမှာက လေတိုက်တော့ အေးအေးလေး အိပ်လို့ရတာပေါ့...အဖေ အလယ်မှာပဲအိပ်တော့မယ်...´ ကျွန်တော်က ၀င်မပြောချင်ဘဲနဲ့
` ကျွန်တော် ဘယ်မှာအိပ်အိပ်ရပါတယ် ဦး..´
` တွေ့လား....လာ..အစ်ကို..အလယ်မှာပဲအိပ်...´ ဦးတုတ်က ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲပြီး
` ဖိုးဒင်...မင်းက အဖေလား...ငါက အဖေလား...´ ဖိုးဒင်က မျက်နှာတချက်ပျက်သွားပေမယ့် ဘာမှမပြောရှာဘူး။ အဖေကိုတော့ကြောက်ပုံရသည်။
` ပြီးရော...အိပ်ချင်တဲ့နေရာမှာအိပ်...´ ဖိုးဒင် စိတ်ကောက်သွားတဲ့ပုံလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းသည်။ နှုတ်ခမ်းစူ၊ မျက်စောင်းထိုးပြီး ခြေထောက်ကိုဆောင့်ပြီး နွဲ့နေတဲ့ ဂေးတွေလိုမဟုတ်ဘဲ
မာန်ဖီနေတဲ့ အိမ်မွေးကြောင်လေးတစ်ကောင်လို ဖိုးဒင်မျက်နှာနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ မျက်နှာထားတင်းတင်းလေး။
` ကဲ...မောင်ရင်...အိပ်တော့...´ ကျွန်တော် အလယ်မှာအိပ်ပါရစေလို့ မပြောတော့။ ဖိုးဒင်ကတော့ အခုဆို စိတ်ထဲက ခုလုခုလုဖြစ်နေလောက်ပြီ။
` ဟုတ်ကဲ့...´ ကျွန်တော်က မနေ့က ဦးတုတ်အိပ်တဲ့ လရောင်ကျနေတဲ့အောက်မှာပဲအိပ်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်က တခါတည်းသယ်လာတဲ့ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး ပြတင်းပေါက်
ကနေ ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်မိသည်။ မည်းနက်နေတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ LED မီးသီးဖြူဖြူလေးတွေလို စူးရှရှ တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်လေးတွေကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဒီနေ့မှ ထူးထူးခြားခြား ကြယ်တွေက
ပြွတ်သိပ်နေတာလား။ဒါမှမဟုတ် မီးခိုးတွေ အခိုးအငွေ့တွေ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ ကင်းတဲ့ ဒီရွာလေးကြောင့် ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည်လင်နေပုံရသည်။ ကြယ်ကြွေတာကို မြင်တဲ့အခါဆုတောင်းရင်
ဆုတောင်းပြည့်သည်တဲ့။ လူမျိုးစုတစ်စုရဲ့အယူအဆတစ်ခုကတော့ ကြယ်ကြွေတာကို မြင်တဲ့သူဟာ...သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်ဆုံးပါးသွားလို့တဲ့။ အယူအဆ တွေက လူတွေပဲလုပ်တာမဟုတ်
လား။ အကယ်လို့ ကြယ်ကြွေတာ ကျွန်တော်မြင်ရင်ကော ဘာကိုဆုတောင်းမိမှာလဲ။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ pron star တွေနဲ့ porn movie တကားလောက်ရိုက်ခွင့်ရှိပါစေဟု ဆုတောင်းရမှာလား။ သို့တည်းမဟုတ်
နောင်ဘ၀ဆိုတာရှိခဲ့ရင်...ဒီလိုဘ၀မျိုးဘယ်သော ဘယ်သော အခါမှ မရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမိမှာလား။ ကျွန်တော့်အနာဂတ်ကကော ဘယ်မှာလဲ။ ကြယ်တွေလို ပြွတ်သိပ်နေတဲ့လူလောက ကြီးမှာ အထွန်းလင်း
ဆုံးကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် အစွမ်းကုန်လောင်ကျွမ်းပစ်ရမှာလဲ။ လောကကြီးမှာ လူတန်းစေ့နေနိုင်ဖို့...နောက်ပြီး မနက်နိုးထလာတိုင်းမှာ သံပတ်ပေးထားတဲ့
နာရီမြည်သံနဲ့မနိုးထဘဲ အေးချမ်းစွာ တိတ်ဆိတ်စွာ သဘာဝအတိုင်းနိုးထဖို့ကို ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားရအုံးမှာလဲ။ လောကကြီးကလည်း ဘာလို့များ လိုချင်တဲ့အရာတွေ ဒီလောက်တောင် များပြားနေတာလဲ။
၀ါးတားတားသာရှိသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အခုနေရာကပဲလှမ်းကြည့်နေမိသည်။ အခုထိတော့ အိပ်မက်တွေဟာ ကောင်းကင်မှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းတုန်းပါပဲ။ ကဲ...စာဖတ်သူများရော...
ဒီနေ့မနက်ခင်းက အရင်နေ့တွေထက်စာရင် ပိုပူသည်။ အိပ်ယာက ထတုန်းကလည်း တကိုယ်လုံးချွေးတွေနှင့်စိုရွဲနေသည်။ အခု စာသင်ရသည်မှာလည်း နှဖူးက ချွေးတွေတသီးသီး။
ရွာဦးကျောင်းလေးက အပင်တွေ အရိပ်တွေပေါပေမယ့် မနေ့ကထက်ပိုပူသာ သေချာသည်။ အေးမြတောင် နှုတ်ခမ်းစပ်နားမှာ ချွေးတွေစို့နေသည်။ လက်ဖမိုးနှင့်တချက်သုတ်လိုက်သေးသည်။ အစိမ်းရောင်
နုနု ၀တ်ထားသော အေးမြရဲ့အင်္ကျီရဲ့ ရင်ဘတ်နားမှာပင်ချွေးကြောင့်အကွက်လိုက်လေးဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်မကြည့်မိအောင်နေပေမယ့် ကြည့်ဖြစ်သွားသည်။ မနေ့ကထက်စောစောလွတ်ပေးလိုက်သည်။
အေးမြက မနေ့က ထမင်းစားဖိတ်တဲ့ ၀င်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ကျွန်တော့်နားရောက်လာသည်။
` ဆရာ...၀င်းထွန်းက ဆရာ့ကိုပြောစရာရှိလို့တဲ့...´
` ပြောလေ...ဘာမေးမလို့လဲ...´ ၀င်းထွန်းက အေးမြကို မျက်ရိပ်တခုပြလိုက်တာကို ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့လိုက်သေးသည်။ အေးမြက
` ဆရာ...ကျွန်မ အရင်ပြန်နှင့်မယ်...´
` အေး...´ ထူးခြားတာတော့အမှန်။ အေးမြက ခါတိုင်းလို ထမင်းလာစားဖို့မပြော။ အခုဆို ၁၁နာရီလောက်တော့ရှိမည်ထင်။
` ဆရာ...မနေ့က ...ကျွန်တော်....လာခေါ်မယ်ပြောပြီး ...´
` အော်....ရပါတယ်...ကိစ္စမရှိပါဘူး...အစ်ကိုဖိုးဒင်တို့ဆီမှာပဲစားဖြစ်သွားတယ်လေ...´ သူပြောမှသတိရသည်။ မနေ့က လာခေါ်မယ်ပြောပြီး မလာ။ ကျွန်တော်တကယ်ပင်မေ့တောင်နေပြီ။
` မနေ့က အမေနေသိပ်မကောင်းတာနဲ့ ဆရာ့ကို လာမခေါ်ဖြစ်တာ...´
` ဟုတ်လား...အခုကော..ကောင်းသွားပြီလား...´ ၀င်းထွန်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက တစ်ခုခုကိုတောင်းဆိုနေသလိုပဲ။
` အခုသက်သာသွားပါပြီ။...ဆရာ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်နဲ့တခါတည်းလိုက်ခဲ့ပြီး ထမင်းလိုက်စားပါလား´
` ရပါတယ်....ဆရာ့ကိုအားနာစရာမလိုပါဘူး။ ၀င်းထွန်းအမေလည်းနေမှမကောင်းတာ...နောက်မှဆရာလိုက်စားမယ်လေ..´ ၀င်းထွန်းရဲ့မျက်နှာတချက်ပျက်သွားသည်။ ရွာသားတွေက
` ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာပါ....ဆရာ့ကို စားစေချင်လို့ပါ..´ ကျွန်တော်မငြင်းချင်တော့ပါ။
` ကောင်းပြီလေ...အစ်ကိုလိုက်စားမယ်...´ ၀င်းထွန်းမျက်နှာကအခုမှ ပြုံးနိုင်တော့သည်။
` ဆရာ...ပေး...´ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ဖိုင်တွဲလေးကိုလှမ်းတောင်းသည်။ မပေးဘူးလို့စိတ်ကူးလိုက်ပေမယ့် ၀င်းထွန်းလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မိသည်။ ၀င်းထွန်းက ဖိုးဒင်တို့လောက်
အသားမမည်း။ ညိုရုံလေးသာရှိသည်။ နဂိုအသားဖြူပုံရသည်။ တခုထူးခြားသည်မှာ စကားအပြောအဆို ယဉ်ကျေးသည်။ ဖိုးဒင်လို `ငါ...ငါ´ နဲ့မနေ။ ရွာဦးကျောင်းကနေတော်တော့ကို လျှောက်ရသေးသည်။
ဖိုးဒင်တို့အိမ်နဲ့ ဆို တောင်နဲ့မြောက်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ (Y) ၀ိုင် ပုံစံ ဖြစ်နေသည်။ ရွာဦးကျောင်းက၀ိုင် ရဲ့ခြေထောက်နားမှာဆိုရင် ဖိုးဒင်နဲ့ ၀င်းထွန်းအိမ်က ၀ိုင် ရဲ့ထိပ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာ။ ၀င်းထွန်းတို့အိမ်က
အေးမြ အိမ်ထက်တောင် သားနားသေးသည်။ သစ်သားအိမ်လေးဖြစ်သည်။ ၀ါးထရံကိုမတွေ့ရ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးနှင့်အိမ်လေးမှာ နေချစ်စရာကောင်းသည်။ သေသေသပ်သပ် စီထားသော ခြံစည်းရိုးလေးမှာ အစိမ်း
ရောင်အိမ်သုတ်ဆေးလေးကို သုတ်ထားသေးသည်။ ခြံထဲမှာလည်း အပင်ငယ်လေးများကို သူ့နေရာနှင့်သူ စိုက်ထားသည်။
` အမေ....ဆရာပါလာတယ်...´ သစ်သားအိမ်လေးက ခြေတံရည်အိမ်မဟုတ်။ ၀င်းထွန်းက လှစ်ခနဲ အိမ်တခါးဝရှေ့က အုတ်ခုံလေးကကို ကျော်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားသည်။ သူ့နောက်ကနေ
ကျွန်တော် ခြေလှမ်းမှန်မှန်နှင့်လိုက်သွားသည်။ အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ အသက် ၅၀ နီးပါးရှိပီဖြစ်တဲ့ ၀င်းထွန်းအမေက အပြုံးနှင့်ဆီးကြိုနေသည်။
` ဟုတ်ကဲ့...´ ၀င်းထွန်းအမေက နေကောင်းသေးပုံမပေါ်။ ရှုဆေးဘူးအနီလေးကို လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ၀င်းထွန်းက သူ့အမေလိုမျက်နှာက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း။ ဧည့်ခန်းမှာချိတ်ထားတဲ့
၀င်းထွန်းအမေနဲ့အဖေ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ ၀င်းထွန်းအဖေကို အဝေးကနေ မြင်လိုက်ရသည်။ နှာတံမြင့်မြင့်၊ မျက်ခုံးထူထူ၊ မျက်လုံးအိမ်ကြီးကြီး၊ အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်
ရင် အိန္ဒိယလူမျိုးလိုလို၊ အင်္ဂလိပ်လိုလို။
` မဆာသေးပါဘူးဒေါ်ဒေါ်...´ ဒေါ်ဒေါ်က ရှုဆေးဘူးအနီလေးကို နှာဝမှတေ့လိုက်ပြီး တချက်ရှုလိုက်သေးသည်။
` ဆရာ...ရေနွေးနဲ့..ဒါက...ဆီးထန်းလျက် (ဆီးသီးထန်းလျက်)...´ ၀င်းထွန်းက စွပ်ကျယ်လက်ပြက်ကလေးကို ၀တ်ထားသည်။ ဖိုးဒင်ထက်စာရင် အသားက ဖြူသည်။ ရေနွေးကြမ်းကို ခွက်ထဲ
ထည့်ပေးပြီး ကျွန်တော့်ကိုလာပေးသည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့ အမူအယာတွေက မိန်းမဆန်နေသည်။ သိသိသာသာကြီး နွဲ့နေတာတော့မဟုတ်။ တချက်တချက် နှာခေါင်းက ချွေးကိုသုတ်လိုက်ရင် လက်ကလေးက နွဲ့နွဲ့သွား
` ဆရာ...ကျွန်တော် ထမင်းပွဲပြင်လိုက်တော့မယ်...´ ရေနွေးက နွေးရုံလေးနွေးသည်။ ကြက်သီးနွေး ဆိုလား။ ကျွန်တော် ခေါင်းတချက်ညိတ်ပြလိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲက ဆီးထန်းလျက်ကြောင့်
ပါးစပ်ကိုဟပြီးမဖြေတော့။ ဆီးထန်းလျက်ရဲ့အချိုအရသာက တမျိုးတဖုံစားလို့ကောင်းသည်။ ၀င်းထွန်းက နောက်ဖေးကို တခါတည်းဝင်သွားသည်။ ပုဆိုးကို ကျပ်ကျပ်ဝတ်ထားပေမယ့် လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း
ဘယ်ညာ ခါသွားသော ၀င်းထွန်းဖင်ကြီးများကို ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေက လိုက်ပါသွားသည်။ (ဂလု...ဂဠု...)
`သား ကဒီရွာမှာ ဘယ်လောက်ကြာအုံးမှာလဲ...´
` ဟိုက ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်အထိတော့ နေရအုံးမှာပါဒေါ်ဒေါ်...´
` ဒီမှာနေတာကော...နေသားကျသွားပြီလား...´ ဒေါ်ဒေါ်က ပြောရင်းနဲ့မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ပါ ယောင်ပြီးမတ်တပ်လိုက်ရပ်လိုက်သည်။
` သား...ထိုင်...ဒေါ်ဒေါ် က နောက်ဖေးမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲသွားကြည့်မလို့....´
` ဟုတ်ကဲ့...´ ဒေါ်ဒေါ်က နောက်ဖေးဝရောက်ရုံရှိသေး ၀င်းထွန်းကထွက်လာသည်။
` ဆရာ...လာစားလို့ရပြီ..´ ကျွန်တော်သတိထားမိသည်မှာ ဒီရွာကကောင်လေးတွေရော ကောင်မလေးတွေရော ဟင်းချက်ကောင်းကြသည်။ အခုလည်း ၀င်းထွန်းချက်တယ်လို့ပြောတဲ့လက်
ရာက အေးမြတို့ ဖိုးဒင်တို့လက်ရာလိုမျိုးစားကောင်းသည်။ ကျွန်တော့်ကို ကျွေးဖို့တကယ့်ကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာချက်ထားသည်။ အသားဟင်းက နှစ်ခွက်။ ရှောက်သီးသုပ်ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးကတပွဲ၊ ကြာဇံဟင်းခါးလေး
နှင့်...နောက် ငါးပိထောင်းစပ်စပ်လေးကပါသေးသည်။ ကျွန်တော့် ထမင်းပန်းကန်ထဲကို ဟင်းတွေ ထည့်ထည့်ပေးတဲ့ ၀င်းထွန်းကို မနည်းတားယူရသည်။ ၀င်းထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် မျက်လုံးချင်းဆုံလိုက်တိုင်း ၀င်းထွန်းက
မျက်လွာကို သိသိသာသာချသွားသည်။ ဒီကောင်လေး ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေလားမသိ။ စားသောက်ပြီးတော့
` ဆရာ...အိမ်ရှေ့မှာ အမေနဲ့စကားပြောနှင့်..ကျွန်တော်သိမ်းဆည်းပြီးရင် ဆရာ့ကို အိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်...´ အိပ်လိုက်ပို့လို့...ဦးတုတ်ကြီးရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
` ရတယ်....အစ်ကို ပြန်တတ်ပါတယ်...´ ၀င်းထွန်းက သူ့ပါးစပ်မှာ ပေနေတဲ့ဆီတွေကို လက်ဖ၀ါးနဲ့သုတ်လိုက်ပြီး
` ကျွန်တော် ပြန်ပို့ပြီး ဆရာ့ကို စာမေးစရာရှိတယ်...´ ဒီမှာပဲတခါတည်းမေးလိုက်လေ လို့ကျွန်တော်ပြောချင်သည်။ ရွာသားတွေရဲ့စေတနာကို ကျွန်တော်အရောင်မဆိုးချင်။
` ကောင်းပြီလေ....ဆရာစောင့်နေမယ်...ဖြည်းဖြည်းလုပ်..´ ဒေါ်ဒေါ်က ရေနွေးကြမ်းခွက်လေးကတဖက်၊ ရှုဆေးဗူးလေးကတဖက်။ ဒေါ်ဒေါ့်ကိုကြည့်ရသည်မှာမောနေပုံရသည်။ ကျွန်တော်စကား
ပြောချင်ပေမယ့် ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ရေနွေးကြမ်းကိုသောက်နေလိုက်သည်။ ကွမ်းတညက်ခန့်ကြာတဲ့အခါ ၀င်းထွန်းက နောက်ဖေးကနေထွက်လာသည်။ စာအုပ်လေးပါတခါတည်းပါလာသည်။
` အမေ...သားဆရာ့ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးရင်း စာသင်ခိုင်းအုံးမယ်...နေမ၀င်ခင် သားပြန်ခဲ့မယ်...´
` အေး...ဖြည်းဖြည်းသွား...သား ဆရာ့ကိုလည်း နောက်ထမင်းစားဖို့ခေါ်ခဲ့အုံး...´ ကျွန်တော်က ဒေါ်ဒေါ်ကို ပြုံးပြလိုက်သည်။
` သား...နောက်နေ့တွေလည်း ၀င်းထွန်းနဲ့လိုက်လာပြီး အမေတို့နဲ့လာစား...´ ကျွန်တော့်ကို ဟိုးအရင့်အရင်က ရုပ်ရှင်ထဲက ကျောင်းဆရာတွေလို တလေးတစားဆက်ဆံကြသည်။ ထမင်းကို
ဘယ်အိမ်ဝင်စားစားတောင်ရသည်။ ကျွန်တော့်အမေက တောင် ကျွန်တော့်ကို စားရေးသောက်ရေးအဆင်မပြေမှာစိုးရိန်နေသေးသည်။
` ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ဒေါ်...ကျွန်တော့် ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်...´
` အေးကွယ်...ငါ့သား ဘုန်းကြီးပါစေ ...အသက်ရှည်ပါစေ...´
` ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ ဒေါ်ဒေါ်...´ ၀င်းထွန်းက ရှေ့ကသွားသည်။ ခြံဝနားမှာကျွန်တော့်ကို စောင့်နေသည်။
` ဆရာ...ပေး...´ ကျွန်တော့်လက်ထဲက ဖိုင်တွဲကိုလှမ်းတောင်းပြန်သည်။
` ရတယ်...အစ်ကိုပဲကိုင်ထားတော့မယ်...´ အတင်းတော့လုပြီးမယူ။ ၀င်းထွန်းက ကျွန်တော့်ထက်စာရင် နည်းနည်းပုသည်။ ၀ သည်ဟုပြောလို့မရပေမယ့် အသားစိုင်တွေနဲ့ တစ်တစ်ရစ်ရစ်ရှိသည်။
` ဆရာ ကို ကျွန်တော် မေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်...´
` မေးလေ...ဆရာသိသလောက်အကုန်ဖြေပေးမယ်...´ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သတ်လို့ သိသင့်သလောက်သိပေမယ့် အသုံးနည်းတဲ့ အီဒီယမ် တစ်ခုကို မေးပါက ကျွန်တော်မသိနိုင်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း ရှေးဟောင်းစာတွေမှာသာ ပါတတ်တဲ့ စာလုံးမျိုး။ အသုံးအနှုန်းမျိုး။ ၀င်းထွန်းက စာကြိုးစားသည်။ စာသင်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့် မျက်နှာကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး နားထောင်သည်။
` ဟို....ဆရာ့မှာ ရည်းစားရှိလား...´ မှားပါတယ်ဗျာ လို့အော်လိုက်ရမှာလား။ တခါတလေ မေးခွန်းကို မေးခွန်းနဲ့ပြန်ဖြေတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။
` ၀င်းထွန်း ဘာလို့မေးတာလဲ... ´
` ကိုယ့်ဆရာမှာ ရည်းစားရှိမရှိသိချင်လို့ပါ...´ ကျွန်တော်ကသာ ၀င်းထွန်းမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပေမယ့် ၀င်းထွန်းက ရှေ့တည့်တည့်ကိုသာကြည့်နေသည်။
` အစ်ကို မဖြေခင်...၀င်းထွန်းကို အရင်မေးမယ်..၀င်းထွန်းမှာကော ကောင်မလေးတွေရှိလား...´
` အခုထိ လုံးဝကိုမရှိသေးပါဘူး...နောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး...´ အဖြေကတမျိုးပါလား။ ၀င်းထွန်းဟာ ကျွန်တော်ထင်သလို ကျွန်တော့်ကို ကြိုက်နေတာများလား။
` မသိဘူး....ကျွန်တော်...ချစ်လို့ကိုမရဘူး...´ ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်နှင့်ဝင်းထွန်းမျက်လုံးချင်းဆုံသွားသည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့မျက်လုံးတွေက ခုနက အိမ်မှာနဲ့တခြားစီ။ မျက်လွာမချသွားတဲ့အပြင်
` ၀င်းထွန်းစိတ်ကြိုက်...မတွေ့သေးလို့နေမှာပါ...မြို့ပေါ်မှာတော့ အချောအလှတွေအများကြီး...´ ကျွန်တော်ကပဲ အလျှော့ပေးပြီး ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်ရသည်။
` အင်း....ရန်ကုန်မှာ ရှိတယ်...´ ဖိုးဒင်ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်း ဆက်ပြီးလိမ်လိုက်ရသည်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖိုးဒင်လို ကျွန်တော့်ကို သင်ခိုင်းမယ့်ပုံမပေါ်။
` အော်...ဒါဆို ဆရာ လွမ်းနေမှာပေါ့..´ ၀င်းထွန်းရဲ့ လေသံကပြောင်းသွားသည်။ မသွက်လက်တော့။
` ဒီလိုပါပဲကွာ...ကြာရင်တော့လည်း နေသားကျသွားမှာပါ...´
` ....´ အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၅ လောက်လမ်းလျှောက်ရသည်ထင်။ ကျွန်တော်ရော ၀င်းထွန်းပါ တကိုယ်လုံးချွေးတွေစိုရွဲနေသည်။ နေ့လည်၁၂နာရီကျော်သွားပေမယ့် နေအပူရှိန်ကတော့ ပိုပြီးပြင်းလာ
သလားထင်ရသည်။ ဖိုးဒင်တို့အိမ်ကိုရောက်တော့ တံခါးကပိတ်ထားသည်။ ကျွန်တော်ကပဲရှေ့ကသွားပြီး တံခါးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်သည်။ အိမ်ထဲတွင် ဘယ်သူမှမရှိ။ ဦးတုတ်ဒီနေ့ပြန်မလာ။
` လာ...ခဏထိုင်အုံး...အစ်ကို အင်္ကျီလဲလိုက်အုံးမယ်...´ ၀င်းထွန်းက အိမ်ရှေ့တံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီး ပြတင်းပေါက်နားတွင်ဝင်ထိုင်သည်။ ကြိုးတန်းမှာလှန်းထားတဲ့ စွပ်ကျယ်လေးကို ကျွန်တော်
ယူဝတ်လိုက်သည်။ ၀င်းထွန်းက ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်နေသည်။
` ဆရာ ဒီရွာမှာနေသားကောကျပြီလား...´ ကျွန်တော် အတွင်းခံကိုချွတ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိပေမယ့် ၀င်းထွန်းက ကြည့်နေတော့ မချွတ်ဖြစ်တော့ဘူး။
` ဒီနေ့မှ ပိုပူသလားလို့...´
` ဟုတ်တယ်....ကမ္ဘာကြီးက ပူနွေးလာပြီလေ...´ ၀င်းထွန်းက သူ့ရှပ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ ထိုင်ရာကထပြီး ကျွန်တော့်နားလျှောက်လာသည်။ သူ့အင်္ကျီကို ကြိုးတန်းမှာလာလှမ်းသည်။
၀င်းထွန်းရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးမှာ မည်းနက်မနေဘဲ ပန်းရောင်နဲ့အနီရောင်စပ်ကြား နီတီတီလေးဖြစ်နေသည်။ ချက်အောက်နားကနေ ပါးဆိုးခါးပုံစအထိ မည်းနက်ပြီးတန်းနေသော အမွေးကွေးကွေးလေးတွေက ၀င်းထွန်း
ရဲ့ အနည်းငယ်ပူနေသော ဗိုက်နဲ့သိပ်မလိုက်။ ကျွန်တော့်ရှေ့ကို ဖြတ်လျှောက်သွားတော့ ၀င်းထွန်းရဲ့ဖင်ကြီးတွေက တုန်တုန် တုန်တုန်နဲ့ဘယ်ညာယိမ်းသွားသည်။
` ရတယ်ဆရာ...ကျွန်တော့်ကိုယ့်ကို ခပ်သောက်မယ်...´ ကျွန်တော်က နောက်ဖေးနံရံမှာထောင်ထားတဲ့စားပွဲဝိုင်းလေးကို သွားယူဖို့နောက်ဖေးကိုဝင်သွားလိုက်သည်။ ၀င်းထွန်းကလည်းရေသောက်
` ဟာ...မဟုတ်တာ...ပေး...ကျွန်တော့်ကိုပေး...´ ၀င်းထွန်းရဲ့ကျောပြင်ကြီးက ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို အတင်းတိုးဝင်လာသည်။ အိစက်နေသော ၀င်းထွန်းဖင်ကြီးတွေကို ကျွန်တော့်ညီငယ်နဲ့ပွတ်မိ
သွားသည်။ ကျွန်တော်မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပြီး စားပွဲခုံကို သူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ ရေကလည်းငတ်လာသည်။ ၀င်းထွန်းခုံကိုအရှေ့မှာသွားထားတုန်း ကျွန်တော် ရေသောက်ပြီး အပေါ့သွားလိုက်သည်။
အခုမှ နေသာထိုင်သာရှိသွားသည်။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတော့ ၀င်းထွန်းက ရေသောက်နေသည်။
` အခုမှပဲ ရင်ထဲအေးသွားတော့တယ်...´
` အင်း...´ ပြတင်းပေါက်နဲ့မျက်နှာမူနေတဲ့ဘက်ကို ကျွန်တော်ရွေးပြီးထိုင်လိုက်သည်။ ဒါမှ လေတိုက်ရင် နည်းနည်းအေးမှာ။ ၀င်းထွန်းက ရှေ့တည့်တည့်လာမထိုင်ဘဲ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာဝင်ထိုင်
` ကဲ...၀င်းထွန်း နားမလည်တာရှိရင်မေးလေ...´
` ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာလုံးအခေါ်အဝေါ်နည်းနည်းသိချင်တာ...´
` အင်း...အစ်ကိုသိသလောက်ပြောပြမယ်လေ...အစ်ကိုက အခုမှစာသင်တော့ ဆရာကြီးတွေလိုတော့ မေးတိုင်းမသိနိုင်ဘူးလေ...´
` ဟုတ်ကဲ့...ဆရာသိသလောက်ပဲပြောပါ...´ ၀င်းထွန်းက သူယူလာတဲ့ဗလာစာအုပ်လေးကိုဖွင့်လိုက်သည်။ အထဲမှာ ဘာမှတောင်မရေးရသေး။ အသစ်စက်စက်။
` ဟို...ဆရာ...မရိုမသေ...လီးကို ဘယ်လိုခေါ်လဲ...´ အိုးမိုင်ဂေါ့ လို့အော်ရမလား။ စာရေးဆရာမ ဂျူး လို `ဘုရားရေ´ လို့ပြောလိုက်ရမလား။ သို့တည်းမဟုတ်...တရုတ်ကားတွေထဲကလို မိုးနတ်မင်း
ရေ ကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်ပါအုံးလို့ ဒူးထောက်ပြီး အော်လိုက်ရမလား။ ဒီရွာက ရွာသားတွေက တကယ့်ကို အာဂ ယောကျာ်းတွေပါပဲလား။ ကျွန်တော်က တကယ့်ကို စွဲဆောင်မှုရှိနေလို့လား။
` ၀င်းထွန်းက ဘာလုပ်မလို့လဲ...´ ၀င်းထွန်းက ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို မျက်တောင်မခတ်လဲကြည့်တယ်။ (ကျွန်တော်ကတော့ မျက်တောင်ခတ်ပါသည်)
` ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားလို့ပါ...´
` စိတ်ဝင်စားလို့....´ ကျွန်တော်က အံ့သြတကြီးပြောပေမယ့် ၀င်းထွန်းကတော့ ဘာမှမဟုတ်သလို မထုံတတ်သေး။
` ခေါ်နည်းတွေကတော့ အများကြီးပဲ...penis, cock, dick, နောက်ပြီး prick...သိပ်မသုံးတာတွေလည်းရှိသေးတယ်..Chopper, knob, pecker, tool...ရှိရင်လည်းရှိအုံးမယ်...ယူကေ (UK) ကခလေးတွေခေါ်တာကျတော့ willy...´
` အများကြီးပဲ...ဆရာတော်တော်လေ့လာထားတာပဲ....´ဆရာလည်းမင်းလိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့ကွာ...လို့ ကျွန်တော်ပြန်မဖြေပါ။
` ကျွန်တော့်ကို ရေးပေးပါလား...´ စာအုပ်ကို ကျွန်တော့်ဘက်ကိုထိုးပေးသလို လူကလည်း ကျွန်တော့်နားကပ်လာသည်။ ရန်ကုန်သား (အကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါ..)တွေလို ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့တွေ၊ရေမွေး
နံ့တွေ၊ နောက် ပီကေ (chewing gum)စားလို့ထွက်လာတဲ့ပါးစပ်က ပူရှိန်းနံ့အေးအေးတွေတော့မရ။ ၀င်းထွန်းကိုယ်ပေါ်က ချွေးနံ့ခပ်ပျော့ပျော့တော့ရသည်။
` အစ်ကိုလည်း စာလုံးပေါင်းသိပ်မရဘူး...မသေချာရင် dictionary လှန်ကြည့်..´
` ရပါတယ် အစ်ကို...မသိတာထက်စာရင်တော်သေးတာပေါ့...´ ကျွန်တော်က ရေးနေတုန်း ၀င်းထွန်းရဲ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ကိုလာကိုင်သည်။ ကျွန်တော် မသိမသာ ပေါင်ကိုရွေ့လိုက်ပေ
မယ့် နောက်မဆုတ်သွား။ ၀င်းထွန်းက ဂေးပါလို့ပြောစရာမလိုအောင်ကို ဂေး နေပါသည်။
` ရော့..ပြီးပြီ... နောက်ကော ဘာသိချင်သေးလဲ...´ စာအုပ်ကို လှမ်းမယူသေးဘဲ လက်က ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းနားအထိတောင်ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော့်ညီငယ်က ခေါင်းထချင်နေပြီ။ ဟူး...။
` ဒါဆိုရင်...ဟို...ယောကျာ်းချင်း ကြိုက်တဲ့...လိင်တူဆက်ဆံတဲ့ယောကျာ်းကိုကော ဘယ်လိုခေါ်လည်း...´ ကျွန်တော်ဖြေသင့်သလား။ ၀င်းထွန်း က နေတဲ့ ဇာတ်ကို ကျွန်တော်သိသည်။ ဒီယုန်မြင်လို့
ဒီခြုံထွင်နေသည်။ (စကားပုံမှန်လားမသိပါ...မှားရင် စာဖတ်သူများပြင်ပေးကြပါ) ။
` သူလည်းအများကြီးပဲ...ရင့်ရင့်သီးသီး ခေါ်တာလည်းရှိတယ်၊ သာမန်ခေါ်တာလည်းရှိတယ်...ဗန်းစကားတွေလည်းရှိတယ်...ငါတို့နိုင်ငံမှာတောင်ခေါ်တာတွေကနည်းတာမှမဟုတ်တာ...´ ၀င်းထွန်း
လက်တွေက သိသိသာသာကိုလာပွတ်နေသည်။ ကျွန်တော် သူ့လက်ကို ဖယ်ချ မပစ်ချင်။ သိပါလျက်နဲ့မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။
` ဟုတ်တယ်နော်.... အခြောက်..ဂျီပုန်း...ဂျော်...အပုန်းမ....တချို့တွေဆိုရင်...အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကို ကျက်သရေယုတ်တယ်လို့... ရောဂါပိုးဖြန့်သမားတွေလို့ ပြောကြသေးတယ်...ပြီးရင် ပြောတဲ့သူတွေ
ကပဲ အဲ့ဒီ့ အခြောက်တွေနဲ့ ပလူးပလဲ... ဆရာကော...အခြောက်တွေကိုရွံလား...´ ၀င်းထွန်းအသံက သိသိသာသာကို မိန်းမဆန်လာသည်။ လက်ညှိုးထိပ်လေးကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီငယ်ကို မထိတထိ လုပ်နေသည်။
` အစ်ကို..ရွံရင်...အခု ၀င်းထွန်းကို မောင်းထုတ်လိုက်တာကြာပြီ...´ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ် အံ့သြတယ်ဆိုတာထက်အံ့သြရသည်။ ဘာလို့များဒီလိုစကားတွေထွက်လည်းဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်
လောက်အောင် ဖြစ်ရသည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေရဲ့ညှို့ဓာတ်တွေအောက်မှာ ကျွန်တော် မူးယစ်မိပြီလား။ ၀င်းထွန်း ဒေါသထွက်မယ်လို့ကျွန်တော် ချက်ချင်း ထင်လိုက်ပေမယ့် ဒေါသမထွက်ဘဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ညီငယ်ကို
လက်နဲ့အပြည့်အ၀ကို ကိုင်နေတော့သည်။ ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်ပါ မျက်တောင်မခတ်ဘဲ ၀င်းထွန်းမျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။
` ဆရာ...ကျွန်တော် ကြည့်ချင်တယ်...´
` ဒီတိုင်းတော့မရဘူး...´ ၀င်းထွန်းမျက်ဝန်းတွေက တကယ့်ကို ညှို့ဓာတ်တွေပြည့်နေသည်။
` အစ်ကို လုပ်ခိုင်းတာလုပ်ပေးရမယ်...´ ဦးတုတ်ရဲ့လေသံအတိုင်း ခပ်သြသြ ပြောလိုက်သည်။
` လုပ်ပေးမှာပေါ့ ဆရာရယ်...´
` ကျွန်တော်ကလည်းအတည်ပြောတာ...ဆရာခိုင်းတာအကုန်လုပ်ပေးမယ်...´ ကျွန်တော့်ညီငယ်လေးကို အစွမ်းကုန်ဖျစ်ညစ်နေသည်။ အတွင်းခံထဲတွင် အစွမ်းကုန်ခေါင်းထောင်နေသော ညီငယ် က
တောင်အားကြီးလို့ နာတောင်နာလာသည်။ စွပ်ကျယ်ကိုတော့ မချွတ်တော့ဘဲ ပုဆိုးခါးပုံစကို ကျွန်တော်ဖြေချပေးလိုက်သည်။ နောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဖင်ကိုကြွပြီး အသာချွတ်ချလိုက်သည်။ ဘောင်းဘီထဲက
ငေါက်ခနဲထလာသော ကျွန်တော့်ညီငယ်က ၀င်းထွန်းရဲ့ဖျစ်ညစ်မှုတွေကြောင့် သာမန်ထက်ကြီးနေသည်။ အကြောတွေက ခါတိုင်းထက် ဖောင်းကားနေသလိုပင်။
` ဆရာ့ဟာက အကြီးကြီး....´
` အင်း...´ ၀င်းထွန်းရဲ့လက်ကလေးတွေက တောသား သာပြောတယ် နူးနူးညံ့ညံ့ရယ်။ လီးရဲ့အရင်းနားကနေ ဒစ်ဖျားထိ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်သာတခြားသူတွေရဲ့လီးကို ကိုင်
ပေမယ့် ၀င်းထွန်းလို အသာအယာ မကိုင်တတ်။
` ၀င်းထွန်း ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆို...´
` ဟုတ်....ပြောလေ...မပြောဘဲ ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ...´ ကျွန်တော်ပြောရမှာအားနာပေမယ့် ပြောလိုက်ရသည်။
` please suck my dick...´
` yes, sir´ ၀င်းထွန်းက ထိုင်နေရာကနေ သူ့ကိုယ်ကို မှောက်အိပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့လီးဆီကို မျက်နှာအပ်ထားလိုက်သည်။ လျှာဖျားလေးက ဒစ်အဆုံးနားလေးကို ထိရုံလေး ထိသွားသည်။
ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံး အကြောတွေတောင့်တင်းသွားသည်။ ၀င်းထွန်းက ကျွန်တော့်လီးကို သူတန်ဖိုးအထား ဆုံးအရာတစ်ခုကို ကြည့်သလို တသသ ကြည့်ပြီး ပါးစပ်ကိုအသာဟ ပြီး နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ကာ သွင်းယူလိုက်သည်။
` ဟူး..........ကျွတ်....´ ပါးနှစ်ဖက်ကို ချိုင့်အောင် အားနဲ့စုပ်ယူလိုက်တဲ့ ၀င်းထွန်းရဲ့စုပ်ချက်တွေက တချက်တည်းနဲ့တင် လရည်တွေထွက်လောက်သည်။ မျက်လုံး နှစ်ဖက်ကိုမှိတ်ပြီး ကျွန်တော်
ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်သည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့ ပြုစုမှုအောက်မှာ မှိန်းမောနေလိုက်သည်။ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ကလေးတယောက် lollipop စုပ်သလို စုပ်နေတော့သည်။ အရင်တခါ အစုပ်ခံဖူးတာထက် အဆပေါင်းများစွာကောင်းသည်။
` ရပြီ...၀င်းထွန်းရပြီ...´ နှုတ်ခမ်းတ၀ိုက်မှာ တံတွေးတွေနဲ့ စိုနေသည်။
` ကျွန်တော် မ၀ သေးဘူး...´ ဟောဗျာ...လီးစုပ်တာတောင် ၀တယ် မ၀ဘူးရှိသေးတယ်။
` ဒီ့ထက်ကောင်းတာ ကျွေးမယ်...´
` ဆရာ...ass ကို fuck မှာမလား...´ အင်္ဂလိပ်စာလုံး ညှပ်ပြီးပြောတော့ နားဝင်ချိုသလိုတော့ရှိသား။ ဆရာ ဖင်လိုးမှာလား လို့မေးတာထက်တော့ ကောင်းပါသေးသည်။
` yes´ ၀င်းထွန်းက မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ၀တ်ထားသော ပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်သည်။ အတွင်းခံမ၀တ်ထားသဖြင့် အဆီတွေရှိသော အိနေတဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ၀င်းထွန်းလီးက အစွမ်းကုန်ခေါင်း
ထောင်နေသည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့ ဒစ်ကအရင်း လီးတချောင်းလုံးထက်စာရင်သေးနေသည်။ အရင်းက ခပ်တုတ်တုတ်။ ကြံတွေရဲ့ ချို (ဂျို) တွေလို ကော့နေသည်။
` မင်း ဟာကလည်း မသေးပါလား...´
` အဖေ ပေးတဲ့အမွေပေါ့..´
` ဒါဆို...၀င်းထွန်းအဖေရဲ့ cock က အကြီးကြီးပေါ့..´
` နေအုံး...အစ်ကို ကွန်ဒုံး သွားယူလိုက်အုံးမယ်...´
` ဟုတ်...ကျွန်တော် ဘယ်လို နေပေးထားရမလဲ....လေးဘက်ထောက်ပေးထားရမှာလား...ပက်လက်လှန်ပေးထားရမှာလား...´ ကျွန်တော့် အိတ်ထဲက ရန်ကုန်ကပါလာတဲ့ ကွန်ဒုံးကို ထုတ်လိုက်သည်။
ပိုပို လိုလို ယူလာတာမှန်သွားသည်။
` လေးဘက်ထောက်ပေးထား...´ ၀င်းထွန်းက ပြတင်းဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး အိပြီး ဖြူဝင်းနေတဲ့ ဖင်နှစ်လုံးကြီးကို လေထဲတွင် မြောက်ထားသည်။ ဖင်နှစ်မွာကြားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။
ဖင်ကြားထဲတွင် မည်းနက်ကွေးကောက်နေသော အမွေးများက ၀င်းထွန်းရဲ့ချယ်ရီပေါက်လေးကို ၀ိုင်းရံထားသည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့ ချယ်ရီပေါက်လေးက ပါကင် မဟုတ်။ ဟတတ ဖြစ်နေသည်။ ကွန်ဒုံးကို လီးတွင်မစွပ်ခင်
` အား...ကောင်းတယ် ဆရာ...´
` ၀င်းထွန်း ဖင်ခဏခဏ ခံဖူးတယ်ထင်တယ်...´ ၀င်းထွန်းက သမင်လည်ပြန် (၀ိုင်ဝိုင်း သီချင်းမဟုတ်ပါ) ကြည့်သည်။
` အင်း ...ခံဖူးတယ်...ခဏခဏတော့မဟုတ်ဘူး...´
` စပ်စုတယ်လို့တော့ မထင်နဲ့....ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲ...´
` ဦးညိုနဲ့...´ ကျွန်တော် တကယ်လန့်သွားသည်။ ဒစ်ဖျားတွင် စွပ်နေသော ကွန်ဒုံးပင် မ၀င်ချင်သလိုဖြစ်သွားသည်။
` ဟောဗျာ..ကျွန်တော်ကလည်း အတည်ပြောတာ...ဆရာ...ထည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ...ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူး....´ ကျွန်တော်က မထည့်သေးဘဲ လီးကို ဒေါင်လိုက် ဖင်ကြားထဲမှာ ထည့်ပြီး ပွတ်
` ဦးညို ဆိုတာ အေးမြ အဖေမလား...ဘယ်လိုက ဘယ်လိုစဖြစ်တာလဲ...´
` ဆရာ အရမ်းသိချင်နေပုံရတယ်...ပြောပြီးရင်တော့ထည့်လိုက်တော့နော်.....ကျွန်တော်တို့ထန်းတောထဲမှာ ဦးညိုက တခါတလေ လာသောက်တယ်...ဦးတုတ်ကြီးနဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေကတော့
နေ့တိုင်းနီးပါး...ဦးညိုအဲ့ဒီနေ့က သောက်တာများသွားပြီး ထန်းတောထဲက တဲလေးထဲမှာ အိပ်တယ်...အဲ့ဒီ့မှာ ဖြစ်တာပဲ...ကျွန်တော်ကပဲစတာပါ...´
` ၀င်းထွန်းက ဆရာကြီးပဲ...´ ဒစ်ဖျားကို ချယ်ရီဝလေးတွင်တေ့ပြီး အဆီတွေနဲ့ အိနေသောဝင်းထွန်းခါးကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်ချလိုက်သည်။ သုံးပြီးသား အပေါက်မို့ ချောချောချူချူဝင်သွားသည်။
` အား....ဆရာက မပြောမဆို...´
` မင်းပဲ ပြောပြီးတာနဲ့ထည့်ဆို...´
` အား...စိတ်ထဲက မပြင်ဆင်ရသေးတော့နာတာပေ့ါ ဆရာရ...´ သုံးပြီးသားအပေါက်ပေမယ့် အနည်းငယ်တော့ကျပ်သည်။ စီးပိုင်နေသည်။ တပြွတ်ပြတ်နဲ့ တဘက်ဘက် (ဖင်နဲ့ ပေါင်ရိုက်သံ)
တွေဟာ ညီညာစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ အချက် လေးငါးဆယ်သာ ဆောင့်ရအုံးမည်ထင်...ကျွန်တော်ပြီးချင်လာသည်။
` အား...ကောင်းလာပြီ....ဆရာ ...ပြင်းပြင်းလေး...´
` ဟာ...ဆရာ..နေအုံး...ခဏနားမယ်...´ ၀င်းထွန်းကမပြောမဆို မှောက်ချလိုက်သည်။ သူ့ဖင်ထဲက ကျွန်တော့်လီးက ကျွတ်ထွက်သွားသည်။ ကွန်ဒုံးပေါ်တွင် ပေနေသော အကျိအချွဲအပြင်
အ၀ါရင့်ရင့် အဖတ်များပါ ကပ်နေသည်။ ( စာဖတ်သူမျာ ရွံသွားရင် ခွင့်လွတ်ပါ)။ ဒီကောင်လေး သေသေချာချာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်လာခဲ့ပုံမရ။ ၀င်းထွန်းက ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်ကို V ပုံစံကား
` အင်း...´ ဒီတခါ ကျွန်တော် လီးကို မကိုင်ဘဲ ၀င်းထွန်းရဲ့ ဖင်ပေါက်ကိုဖြဲကာထည့်လိုက်သည်။ ပက်လက်ဖြစ်လို့ ၀င်းထွန်းရဲ့ မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော့်မျက်နှာက ကွက်တိ။ ၀င်းထွန်းက ကျွန်တော့်
လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရလာနမ်းသည်။ အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းပေးလိုက်သည်။ ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်အနမ်း၊ (ပထမ အနမ်းက ကျောင်းတတ်တုန်းကဖြစ်သည်)
ကျွန်တော့် ဖင်ကို နိမ့်ချည်မြင့်ချည်လုပ်ပြီး ၀င်းထွန်းရဲ့ချယ်ရီပေါက်လေးကို အားရပါးရ ဇိုးဇိုးဇက်ဇက် ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ ပက်လက်အနေအထားက အထဲကို ပိုဝင်သည်။ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိ ကျွန်တော်
` အား....အား....´ ကျွန်တော်ခါးအားတွေကို အစွမ်းကုန်သုံးပြီး ဖင်ပေါက်လေးထဲကို အားနဲ့ဖိကပ်လိုက်သည်။ လရည်တွေက ကွန်ဒုံးအိတ်လေးထဲတွင်တော့ အပြည့်ဖြစ်သွားမည်ထင်။
` ကောင်းလိုက်တာ ဆရာရယ်....ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မပြီးသေးဘူး...´ ၀င်းထွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရ စုပ်သပ်လိုက်ပြီး ၀င်းထွန်းကိုယ်ပေါ်မှ အောက်ကို လျောဆင်းသွားလိုက်သည်။
အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်နေသော ၀င်းထွန်းရဲ့လီးကို ပါးစပ်ဖြင့်အသာအယာစုပ်သွင်းလိုက်သည်။
` အခု အချိန်မှာ အစ်ကိုက ၀င်းထွန်းဆရာမှမဟုတ်တာ...စာသင်ခန်းထဲမှာသာ ဆရာ´ လက်တဖက်က အပေါ်အောက် အတက်အဆင်းလုပ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ ပြန်ပြုစုပေးလိုက်သည်။ ၀င်းထွန်းက
ကျွန်တော် စုပ်တာကို သေချာကြည့်နေသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ..
` ဆရာ....ရပြီ...ကျွန်တော်ထွက်တော့မယ်....ပါးစပ်ကိုဖယ်လိုက်...´ ဒီတခါတော့ ပါးစပ်ကို လီးနားကနေခွာလိုက်သည်။ လက်ကို ခပ်မြန်မြန် ထုပေးလိုက်ရာ ပူနွေးချွဲပျစ်နေတဲ့ သုတ်ရည်တွေက
ကျွန်တော့်ပါးပြင်ပေါ်ကို တပျစ်ပျစ်နဲ့ ပက်လိုက်သည်။ ပါးပြင်ပေါ်ကစီးကျလာတဲ့ လရည်တွေကို လက်နဲ့ ကျွန်တော်သုတ်ပစ်လိုက်သည်။
` ကောင်းလိုက်တာ ဆရာ....´
` ကဲ...ဇိမ်ခံမနေနဲ့တော့...ထတော့...ဖိုးဒင် အဖေ ပြန်လာတော့မယ်...´ ကျွန်တော့်လီးမှာ အခုထိ တွယ်ကပ်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်လိုက်ပြီး နောက်ဖေးမှာသွားဆေးကြောလိုက်သည်။ ၀င်းထွန်းရဲ့
ဖင်တွေတော့ ဘယ်လိုနေမှန်းမသိ။ ကျွန်တော့်လီးကတော့ အားရပါးရ လုပ်လိုက်ရလို့ဖြစ်မည်။ ခွေခွေလေး အိပ်ပျော်သွားသည်။ ဒစ်ထိပ်ဖျားလေးကတော့ စစချင်းထိုးထည့်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့် နည်းနည်း နာနေသည်။
ကျွန်တော် ဖိုးဒင်တို့ရွာလေးကို အမှန်ပင်ချစ်မိသွားသည်။ အရာအားလုံးပြီး ပြည့်စုံနေသော ရွာလေးကနေ ကျွန်တော် ပြန်တောင် မပြန်ချင်တော့ပါ။ အေးချမ်းသော ဖော်ရွေသော...အိုး...ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံနေသောရွာ...ဖိုးဒင်တို့ရွာကို ကျွန်တော် ဒီတသက် ဘယ်တော့မှမေ့တော့မည်မဟုတ်ပေ။
( စာဖတ်သူ ညီအစ်ကို များကိုလည်း ဖိုးဒင်တို့ရွာကို လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။)
22.12.2009 (9:09 pm) တွင် အပြီးသတ်ရေးသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မပြီးသေးပါ...သိုးငယ် ဆက်ရေးပါအုံးမည်။ ဘယ်တော့ဆက်ရေးဖြစ်မည်ကို သိုးငယ် ကိုယ်တိုင်မသိပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တနှစ်လုံး သိုးငယ်ကို ပျော်ရွင်မှုတွေပေးသော သိုးငယ်သူငယ်ချင်း ချစ်ညီအစ်ကို
အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ နှစ်သစ်မှာ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး ( မဖတ်သူများလည်းပါသည်) ပျော်ရွင်ပြီး လိုရာဆန္ဒတွေ တလုံးတ၀ကြီး ပြည့်ဝပါစေဟု ဆုတောင်းလျက်....
Posted by Alex Aung at 7:43 PM 1 comment:
ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ မေလရဲ့ ပူနွေးတဲ့နေ့လည်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် အိမ်ပြတင်းကတစ်ဆင့် ကျယ် ပြောလှတဲ့ ကောင်း ကင်ကြီးကို မော့ကြည့်နေမိပါတယ်။ အပြာရောင်ပြင်ကျယ်ကြီးမှာ အဖြူရောင်တိမ်ဆိုင်တွေ အနား သတ်နဲ့။ တိမ်ဆိုင်တွေကလည်း ပုံ သဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာများ ဆင်တွေဖြစ်လိုက်၊ ဂဠုန်ဖြစ်လိုက်၊ နဂါးဖြစ် လိုက်နဲ့။ တိမ်ပန်းချီဆိုတာ ဒါပဲထင်ပါရဲ့လေ။ ညနေခင်း လိုတော့ ရောင်စုံမခြယ်သနိုင်သေးတာပ။
၀ရံတာ သစ်ခွစင်ဘက်က တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေနုအေးလေးက ကောင်းလိုက်တာ အနံ့သင်းသင်းတစ်ချို့ခိုတွဲလို့။ မာမီစိုက်ထားတဲ့ နှင်းဆီနံ့လေးတွေလည်းပါတယ်။ ဘယ်လောက်လတ်ဆတ်တဲ့လေတွေလည်း....'အား..ပါး...ရှူး'။
တော်ပြီ...ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းသင်တန်းတစ်ခုကိုမသွားတော့ဘူး။ ရေကူးကန်သွားပြီးအချိန်ဖြုန်းတော့မယ်။ အဲဒီမှာ အလန်းဇယားလေးတွေ ရွေ့ နေတတ်တယ်။ ရေစိုဘောင်းဘီလေးတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း တွေကိုအတိုင်း သာ ပြသပြီး ဟန်ရေးပြနေကြတဲ့ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေကော ဘူထွားကြီးတွေရောရှိတယ်လေ။သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ရင်ထဲတဖိုဖိုဖြစ်ရတာ ကောင်းမှကောင်း။
ရေကူးကန်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်သလို ပြည်သူပိုင်ရေကူးကန်လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နေတဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ ဘလောက်သုံးခုလောက်ဝေးတဲ့ apartment complex တစ်ခုရဲ့ရေကူးကန်လို့ပြောရမှာပါ။ အေးမြ နေတဲ့ရေထဲ ငါးကလေးလိုကူးခတ် လိုက် ရေငုပ်လိုက်နဲ့နေ ရတာ ကျွန်တော်အတော်နှစ်သက်တဲ့ အပန်းဖြေမှုပါ။ စာကျက်ရလို့ခေါင်းရှုပ်တဲ့အခါ အရမ်းညောင်းလာတဲ့အခါ စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ တွေတိုင်း အားရပါးရရေကူးလိုက်မှ ပြေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ရှာဖွေတွေ့ရှိ သတိထားမိတာ မကြာသေးပါဘူး ပြောရရင်တော့။
ဟိ....ဒီနေ့တော်တော်ကျေနပ်နေတယ် စိတ်ထဲမှာ။ မာမီတက်ခိုင်းလို့သာတက်နေရတဲ့ ပန်းချီသင်တန်းကိုမသွားဘဲ လစ်လာရတာကိုပေါ့။ GCE 'A' Level ဖြေဖို့လုပ်နေရတာအပြင် အဲဒီ့သင်တန်းကိုသွားခိုင်းနေတာလေ။ နောက်နှစ် Australia သွား ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုပါတော့။ ကျောင်းတွေရုံးတွေပိတ်တဲ့ စနေ၊တနင်္ဂနွေမဟုတ်ဘဲ ကြားရက်ဖြစ်တာ ကြောင့် လူတွေ အများကြီးမရှိဘဲ လူနည်းနည်းကိုသာ ရေကူးကန် ၀န်းကျင်မှာတွေ့ရတယ်။ အဖွားဖြစ်ပုံရတဲ့ အမျိုး သမီးကြီးရယ် သူ့မြေးနှစ်ယောက်ရယ်က ရေကူးကန်အစပ်မှာ ရေကစားနေကြတယ်။ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲတစ်တွဲက တခြားတစ်ဘက်မှာ နေပူစာလှုံနေကြတယ်။ ဗိုက်ရွှဲရွဲငနဲတစ်ပွေကတော့ အသည်းအသန်ရေကူးနေလေရဲ့။
နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲက အတော်ကြည့်ကောင်းကြတာဗျ။ စော်ကြီးကလည်းအယ်နေတာပဲ ၀တ်ထားပေမဲ့ အသားက ဘော်ဒီမှာကပ်နေတာ။ ရေစိုနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လို့အကောင်းဆုံးက ခပ်ထွားထွားရင်သားက မမာ့တမာ နို့သီးခေါင်းရာလေးတွေပေါ့။ရေကန်ထဲကူး နေရာကနေ ဘောင်ပေါ်ခုန်တက်လိုက်တော့ အညိုရောင် သူမဆံကေ သာတွေဝဲပျံသွားသလို သူ့ထွားအိတဲ့ကိုယ်လုံးကိုမြင်ရတော့ ရင်ထဲ ဂွတ်ထ...ဂွတ်ထ။ သူ့ဘေးနားက ဘဲကတော့ အသက်၄၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အရပ်ကတော့ အတော်မြင့်တာ ၆ပေ ကျော်မယ်ထင်ရဲ့။ သူ့ခန္ဓာ ကိုယ်ကလည်း Fit ပဲ ဖက်တီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ နောက်ကိုပိနေအောင်လှန်ဖီးထားတဲ့ ဆံကေသာရွှေညိုရောင်မှာ ကြာဆံ တစ်ချို့ရောလို့ပါ။ ရင်အုပ်ကားကားကနေ သူ့ဆီးစပ်ထိမွှေးညှင်းနုတွေပေါက်နေတာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတဲ့အပြင် ရေစို နေတဲ့သူ့ရေကူးဘောင်းဘီက အမြှောင်းကြီးကိုထလို့။
ရေကန်ထဲ ကူးခတ်ပြီးရေငုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူတို့အသွင်အပြင်အပေါ် အကြည့်သူခိုးလုပ်နေတာ သတိထားကောင်း သတိထားမိနိုင်သလို သတိမူစရာအဖြစ်လည်း သူတို့သဘောထားချင်မှထားမှာပါ။ အနည်းဆုံး သူတို့ မကြည့်စေချင် မမြင်စေချင်ရင် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလိုပုံစံနဲ့ လာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွတ်.....ကျွတ် ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ် နေကြတယ်။ ရေကူးလိုက် ကန်ဘောင်ပေါ် တက်ထိုင် လိုက်နဲ့ သူတို့တွေ။ အမျိုးသမီးကလည်း ရွှေရင်ထွားထွား နို့သီးခေါင်းထင်းကနဲဖြစ် နေအောင် ရေကူးဝတ်စုံပါးပါးကို အသားရောင်ဝတ်ထားသေးတယ်။ ဘဲကြီးကလည်း အပြာရောင် Speedo နဲ့လေ ဟန်ရေးပ်ြနေတာ ...ဟူး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါင်ကြားက ငထွားက မတားနိုင်မစီးနိုင် ခေါင်းထောင်လာတော့ boxer ဘောင်းဘီတိုလေးသာ ၀တ်ထားတဲ့ ကျွန်တော် ရေကန်ထဲကို ၀ုန်းကနဲ ခုန်ချလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒီနည်းက အလွယ်ဆုံးဖုံးကွယ်နည်း တစ်ခု ဖြစ်တာပဲလေ။ အခုချိန်မှာ ရေထဲမှာ ဂွင်းထု ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စဗျ။ လူတွေ မလစ်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင် မှာများ လုပ်ဖို့လိုအပ်လာမလားမသိ မြင်ကွင်းထဲက ဘော်ဒီရေစိုစို တွေက ဒုံးပျံကိုလောင်စာဖြည့်နေကြသလေ။
ရုတ်တရက် ကျောင်းကားဟွန်းသံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ Damm.. ရေကူးကန်ထဲက ထွက်သွားဖို့အချိန်တန်လာပြီ ပေါ့။ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုလိုက်ပို့မယ့် မိဘတွေက မှတ်မိသွားနိုင်တယ်လေ သူတို့တိုက် ခန်းတွေက ထွက်လာကြတဲ့အခါ မှာပေါ့။ ဘာကြောင့်ဆို တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေက ဒီတိုက်အိမ်ယာမှာ နေထိုင်ကြ တာမို့ပါ။ ဒါကြောင့် ရေကန်ထဲက မြန်မြန်တက် တဘက်လေးခါးမှာချည်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ကို ကောက်ယူကာ ရေချိုး ခန်းရှိရာဘက်ကို လှမ်းခဲ့လိုက်တော့တယ်။ ဟိုစုံတွဲက ဘာကို သဘောကျနေတာလည်းမသိ ကျွန်တော့်အောက်ပိုင်းကို စိုက်ကြည့်ရင်း ဟီး....ဟီးဖြစ်နေကြရော။
'တော်ပါသေးရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဘယ်သူမှ မရှိတာ'
ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေပန်းခေါင်းတွေက အစီအရီပါ။ အကာအရံတော့မရှိပါဘူး။ ခပ်လှမ်းလှမ်း အခန်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ သန့်စင်ခန်းတွေရှိပါ တယ်။ ကိုယ်ပေါ်က ရေစိုနေတဲ့ဘောင်းဘီတိုကို အသာချွတ်မနေတော့ဘူး ဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း တဘက်အကြီးနဲ့ ပွတ်သပ်ခြောက်သွေ့ အောင်လုပ်လိုက်တော့တယ်။ အိတ်ထဲက ခပ်မိုက်မိုက် တီရှပ်နဲ့ဂျင်းတစ်စုံကို ထုတ်ယူလိုက်ကာ လဲလှယ်ဖို့ ဘောင်ပေါ်ကိုတင်ထား လိုက်ပါတယ် ရှူးရှူးဖလားဝါးလို့မပြီးသေးလို့လေ။ ခဏနေက စုံတွဲရဲ့ ပုံရိပ်ကိုမျက်စိထဲက ထုတ်လို့မရသေးဘဲမြင်နေမိသေးပါရဲ့။
ကြွေကမုတ်မှာ ရွှေပြွန်ကရေသွန်နေစဉ်မှာ ခြေသံတဖျပ်ဖျပ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ လူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ် လောက်ပဲ သတိပြုမိပြီး ကျွန်တော့်ဘေးက ကြွေကမုတ်တစ်ခုမှာ ဆီးသွားတဲ့အသံကြားမှ အောက်ပိုင်းကို မသိမသာ ကြည့်လိုက်တော့ ရေစိုနေတဲ့ navy blue Speedo.
'အဲဒီစော်က လန်းတယ်နော်'တဲ့ သူကပြောတယ်။ကျွန်တော်က ဘာပြန်ပြောနိုင်မှာလည်း 'Huh?' ဟုတ်လည်းဟုတ်နေတာပဲဗျာ။
Oh, Shit! သူ့မိန်းမကို ကြည့်နေတာ သူ့ယောက်ျားက သိနေသတဲ့ သေတော့မှာပဲ။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင် ကျွန်တော့်လည်ပင်း ထဲ အသံတွေ တစ်ဆို့ကုန်ပါပြီ။ ဒီဘဲကြီးဘက်ကသာ စကားတွေဆက်ပြောနေတာ ကျွန်တော်က တော့ ဘာမှမတုန့်ပြန်မိဘဲ အသံတိတ် နေမိပါတယ်။ ခဏအကြာမှာ ကျွန်တော့်နောက်ဘက်ကို တစ်ယောက်ယောက် ရောက်လာတဲ့ အာရုံကိုခံစားရတယ် လှည့်မကြည့်မိပေ မယ့်လေ။
ရယ်ရယ်မောမောနဲ့စကားပြောသံကြားမှ တခြားသူမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာလည်းထူပူနေပြီး 'ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရ မလဲ၊ ဒါပေမဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲလေ'ဆိုပြီး သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားတာ က စိတ်ဆိုးနေတဲ့ မနာလိုမှုတွေနဲ့ ပြည့် နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခု။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ပြုံးစိစိ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်က မျက်နှာကိုခပ်တင်းတင်းလုပ်ပြီး ကိုယ်ကပဲမမှားသလို ပြန်အုပ်လိုက်ရပါတယ်။
'ရူးနေလား၊ ဘာကြောင့်ငါက ရူးရမှာလည်းကွ?'
ခါးမှာလျော့တိလျော့ရဲပတ်ထားတဲ့ သူ့တဘက်ကိုပြင်ပတ်လိုက်ရင်း ရယ်ဟဟ စကားဆိုတာများ ဘာမှမခံစား ရသလိုဘဲ။ ဘယ်လိုလူ မှန်းကိုမသိဘူး။
'ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ ယောက်ျားတွေက သူတို့ရည်စား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဇနီးတွေကိုကြည့်ရင် စူးစမ်းရင် မနာလိုဝန်တိုဖြစ် လေ့ရှိ ကြတယ်လေဗျာ ခင်ဗျားလည်းအဲဒီလိုပဲလို့ ကျွန်တော်ကတွေးထင်ထားတာ'
'ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ငနဲတွေပဲ သူတို့ကောင်မလေးတွေကိုကြည့်ရင်မကြိုက်ကြမှာ။ ကြည့်ကောင်းတဲ့သူတွေဆိုကြည့်မိ မှာပဲကွ၊ အထူးသဖြင့် ဘော်ဒီမိုက်တဲ့တစ်ယောက်ဆိုပိုအာရုံစိုက်မိမှာပဲ၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား'
'ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဗျာ ကိုယ့်မိန်းမလှလှကို တစ်ခြားသူတွေကမကြည့်ရင် ဂရုပြုမကြည့်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့'
'ငါတော့ ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီလိုမတွေးမိဘူး၊ ကြည့်လည်းဘာဖြစ်လည်း မကြည့်တော့လည်း ဘာထူးမှာမို့လဲကွ'
'ဒါဆို ငါက လှတဲ့ဇနီးရထားတယ်ပေါ့?'
'သူ....သူက တော်တော်လှတာဗျ' ကျွန်တော် မရဲတရဲစကားဆိုလိုက်မိရပါတယ်။ တကယ်လည်းအတော့်ကိုလှပဆွဲ ဆောင်မှုရှိတဲ့ ရေဆေးငါးကြီးမဟုတ်လား။ ဒီလူကတော့ ဒါကို မထိတထီအပြုံးပြုံးလိုက်ရင်း 'သူ့ tits လေးတွေကိုလည်း ကြိုက်တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်'
ယောက်ျားလေးဟာ ယောက်ျားလေးပါပဲပေါ့ဗျာ။ စိတ်ထဲဘယ်လိုရှိရှိ ခပ်သွက်သွက်ပဲပြန်ဖြေလိုက်မိပါတယ်။ ပေါင်ကြားက ကျွန်တော့် ညီလေးကလည်း အဲဒါမှန်ကန်ကြောင်း အဖြေပေးနေပါပြီ။ ဘောင်းဘီဝတ်မထားဘဲ တဘက် သာပတ်ထားမိတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အကြောင်းတွေးမိပြောမိတဲ့အခါမို့ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်စွာ ခုံးထ လာတာ သတိပြုမိရပေါ့။ အဲဒါကို ဟိုလူလည်း သတိပြုမိဟန်ဖြင့်ပြုံးရင်း 'ငါလည်းထင်ပါတယ် မင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာ' လို့ပြန် ပြောလေရဲ့။
'ဒါဆို မင်း ကစားပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲချင်နေတယ်ပေါ့'
ကျွန်တော်တို့ မျက်ဝန်းချင်းဆုံကြည့်မိကြရင်း အတန်ကြာစကားမဆက်ဘဲငြိမ်သက်နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲမာမာ ဆီ သူ့လက်က ရောက်လာပြီး ခပ်ဖွဖွနှစ်ခါလောက်ညှစ်ရင်း မျက်ခုံးတစ်ဖက်ပင့်ကာ ဘယ်လိုလည်းတဲ့။ တံတွေးများကို 'ဂလု' ဟုမည်အောင် ခက်ခက် ခဲခဲမြိုချမိရင်း 'Yes' တဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က တုန့်နှေးစွာထွက်သွား မိပါတယ်။
သူနူးညံ့စွာပြုံးရင်း'I thought so.' ပြီးတော့ခါးမှာခပ်တည်းတည်းဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို အသာချွတ် ခါးပေါ် အသာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းပေးရင်း မိုးပေါ်ထောင်နေသော သူ့ငပဲဆီမျက်စပစ်ပြကာ ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပေးပါလားတဲ့ လေ။ သူပြောတဲ့ အတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် သုတ်ပေးမိရရင်း နှစ်ဦးသား မျက်ဝန်းတွေက ဘော်ဒီတွေကို အပြန်အလှန် စူးစမ်းနေကြမိပါရော။ အတန်ကြာ တော့မှ သူ့တဘက်ကိုပြန်ပေး လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခြားသူရဲ့ပစ္စည်းကို ပထမဦးဆုံး အကြိမ်သေချာကိုင်တွယ်ရတာ ရင်ထဲဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိပါ။
'ကဲ.....မင်းအ၀တ်အစားလဲခဲ့တော့။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ တိုက်နံပါတ်5အခန်းနံပါတ် (D-17) ကိုလိုက်ခဲ့အခု'
ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်နေတာလည်း၊ ဘာဖြစ်နေတာလည်းအခု မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားရမှာ မဟုတ် လား ယောက်ျား တစ်ယောက်အပေါ်မှာ ဘာကြောင့်များရင်ခုန်နေမိပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ထကြွနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တမှု အာသီသ တစ် ခုအတွက် ဆက်လက်လှုပ်ရှားရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးတွေ အရမ်းခုန်နေတာများ....ဗုံတစ်လုံးအလား။
နည်းနည်းများယိုင်နေရော့သလားပဲ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေက။ အိမ်နံပါတ် ၁၇ ၊ တိုက်ခန်းနံပါတ် ဒီ......။ ဆယ်ကျော် သက်ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို ဒီလူ ဟာသလုပ်သွားတာလား၊ တကယ်လားလို့ ရုတ်တရက်အတွေး ၀င်မိသေး ပါတယ်။ တိုက်နံပါတ်ကတော့တွေ့ပါပြီ အခန်းနံပါတ်က ဘယ်မှာလည်း ရှာစမ်း....ရှာစမ်း။ ကျွန်တော် သူနေတဲ့ တိုက် နံပါတ်ကိုတွေ့ပေမဲ့ချက်ချင်းအပေါ်တက်မသွားသေးဘဲ အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ shopping mall ထဲယောင်နနလှည့်ပတ် နေ မိသေး တော့။ ပြီးမှ အခန်း(၁၅)ရှိရာကို နှေးတုံ့နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ မ၀ံ့မရဲတက်သွားမိပါလေရဲ့ဗျာ။
တံခါး....အခန်းတံခါးကို တစ်ချက်နှစ်ချက်ခေါက်လိုက် အသာငြိမ်လိုက်လုပ်နေရင်း ဒုတိယအကြိမ်ခေါက်ဖို့ လက်အ လှမ်းမှာ 'ကျွီ'ဆိုတဲ့ တံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ ခပ်တောင့်တောင့်လူတစ်ယောက်ရပ်နေတာကို မသဲမကွဲမြင်ရတယ်။ အခန်း မီးတွေဖွင့်မထားဘဲ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ Dim Light တစ်ခုသာဖွင့်ထားတာကြောင့်လေ။
ဖြူဖွေးတဲ့ညာလက်တစ်ဖက်က ကမ်းလာရင်း 'Hi, come in' တဲ့။ ကမ်းလာတဲ့သူ့လက်ကိုလှမ်းကိုင်မိတော့ အတော်နူး ညံ့တဲ့လက် အတွေ့ကို ရရှိရပါတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံသာမက ကျွန်တော့်လက်ကိုမလွှတ်တော့ဘဲ အခန်းထဲကို ညင်ညင်သာသာဆွဲခေါ်ပါ တော့တယ်။ သူ့ဦးဆောင်မှုနောက်ကို ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားရင်း ဘာမှန်းမသိ ကြောက် စိတ်ပေါ်မိရသေးတယ်။
'Glad you could make it,'
သူ့ရဲ့အပေါ်ရုံအ၀တ်ကို ဆိုဖာလက်ရန်းပေါ် အသာလှမ်းတင်လိုက်ရင်း မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်ကို စူးစမ်းလိုက်သေးကာ 'You turn' တဲ့။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို restroom မှာတုန်းက သူမြင်ခဲ့ ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရှေ့မှာအ၀တ်အစားတွေကို တစ်လွှာချင်း ချွတ်ပြရမှာ ကိုတော့ကြောက်နေမိတုန်းပါ။
အ၀တ်တွေကို အသာချွတ် ဆိုဖာပေါ်တင်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ်ကင်းမဲ့သွားချိန်မှာတော့ သူကျွန်တော့်နား လှမ်းလာ ရင်း နူးညံ့တဲ့သူ့ လက်တွေနဲ့ ချောမွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လာပါတော့တယ်။
'Very nice' သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ပခုံးတွေ ဆံနွယ်ခွေတွေကို အသာကိုင်ကြည့်ရင်းဆိုတယ်။ သူ့ လက်ဖ၀ါးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းအောက်ပိုင်းစီဆင်းလာရင်း လုံးဝိုင်းနေတဲ့ ခပ်ကျစ်ကျစ်ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ကိုဆုပ်ကိုင်လာပါရော။
'Very nice' သူအဲဒီစကားကို ထပ်ဆိုပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘော်ဒီကိုသူ့ဆီကိုဆွဲယူလိုက်ရင်းပေါ့။ သူ့ရဲ့မာထောင် နေ တဲ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ညီဘွားရဲ့အပေါ် ဗိုက်သားဆီထောက်နေပါရဲ့။ ခပ်မော့မော့ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်နှာစီ ငုံ့ကိုင်းလာရင်း ထူအမ်း အမ်းနှုတ်ခမ်းအစုံကို အသာငုံထွေးလာပါတော့တယ်။
'Good age...and what's your name?'
'Well, Alex, my name is Ray'
အနမ်းတွေဖလှယ်ကြရင်း သူ့လျှာဖျားတွေဟာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ အသာမွှေကာနေရာအနှံ့သွားလာတော့ အသည်းထဲ အေးလာ သလိုခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ တုတ်ခိုင်တဲ့ သူ့လက်မောင်းတွေက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်တွယ်ဖက်လာလေ သတည်းပေါ့။
အခု....ကျွန်တော့် ငပဲဟာရာနှုန်းပြည့် မတ်ထောင်နေပါပြီ။ နူးညံ့တဲ့ Ray ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုထိုးဝင်ထားလျက်ပေါ့။ သူကျွန်တော့် ငပဲကို အသာငုံ့ ကြည့်လိုက်ရင်း သူ့လက်နဲ့ညင်ညင်သာသာဆုပ်ကိုင်ပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုများ ကိုင်တယ်မသိ နွေးပြီး ဖီးလ်တစ်မျိုးရတယ်လေ။
'That isanice cock you have there, Alex'
အသာဆုပ်ကိုင်ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ သူ့အာခံတွင်းထဲအသာငုံလိုက်ပါရော။ အိုး.....နွေးပြီးစိုစွတ်ထဲ့ အတွေ့က အသစ်ပဲ။ အား.....ရှီး။
နံရံကပ်ပန်းချီတွေပြည့်နေတဲ့ လမ်းသွယ်လေးဆီ ကျွန်တော့်ကိုအသာခေါ်သွားရင်း အိပ်ခန်းတစ်ခုစီ ဦးတည်လိုက်ပါ တယ်။ အခန်းတစ်ခု ရဲ့အ၀မှာ အသာရပ် ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်နမ်းရင်း တံခါးရွက်ကိုဖြတ်သန်းလျက် အတွင်းဘက် ဆီ အသံပြုလိုက်ပါတော့တယ်။ 'Baby, we have company!'
အခန်းထဲ ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့ မြင်လိုက်ရတာက ရေကန်ဘေးမှာ သူ့ရင်သားထွားထွားကိုဟန်ရေးပြတဲ့ ခပ်လှလှမိန်းမ တစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲလျောင်းနေတာကိုလေ။ ကျွန်တော့်ကို နွေးထွေးတဲ့ ကြင်နာမယ့် အပြုံး တွေနဲ့ ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြရင်း အသိအမှတ်ပြုနုတ်ဆက်တယ်ပေါ့။
'Honey, this is Alex. He wants to play with us. Alex, this is Staci'
Staci အိပ်ယာပေါ်ကထရင်း အ၀တ်တွေမပါဘဲ ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပါတယ်။ သူမ....သူမဟာ ကျွန်တော့်ကို ချွေးပြန်အောင်လုပ် နေသလိုပါပဲ။ ရင်သားခပ်ထွားထွားတွေဆီ မျက်စိကျနေတဲ့ကျွန်တော့်ကို သူမရဲ့လက်မောင်း တွေနဲ့ ဖက်ရင်း အသာညှစ်လိုက်တာ 'Oooh!' သူမ ရင်သားတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်တွေမှာထိကပ်လာတာများ အိနေတာပဲ။ ဆီးခုံမွှေးတွေဟာလည်း ကျွန်တော့်ညီဘွားဆီမထိ တထိကလိနေတာများ ဂွတ်ထ...ဂွတ်ထ။
'You areacutie!'
ကောင်းကင်ဘုံ....ဟုတ်တယ် ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားသလို ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ငနဲက ကျွန်တော့် ညီဘွားကိုသူ့လျှာ၊ သူ့အာတွေနဲ့ပြုစုနေချိန်မှာ သူ့ရဲ့ sexy wife က ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေး တွေ၊ နှုတ်ခမ်းတွေ နားပေါက်လေးတွေ ကိုသူ့လျှာဖျားနဲ့ ကလိနေတာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းဗျ။ ကျွန်တော့်လက်က လည်းဘယ်အငြိမ်နေပါ့မလည်း အိပ်ယာပေါ်ကိုဘေးတစောင်း လှဲလျောင်းသွားတဲ့ နူးညံ့တဲ့အသားတွေနဲ့ ပြည့်ဖောင်း နေတဲ့ သူမရဲ့ pussy ကိုကလိတော့တာပေါ့။
အိပ်ယာဘေးက ဘီဒိုလေးရဲ့အံဆွဲထဲက condom ကိုလှမ်းယုကာ Ray က ကျွန်တော့်ငပဲမှာစွတ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ Staci ကကျွန်တော့် ကို အိပ်ယာပေါ်အသာထိုင်ခိုင်းရင်း သူ့အပေါက်ဝမှာတေ့ကာ အပေါ်ကတက်ဆောင့်ပါတော့ တယ်။ အိုး....ရင်ထဲဘယ်လို မှန်းမသိတော့ အောင်ကောင်းပါတယ်။ သူမရဲ့အတွင်းကြွက်သားတွေကလည်း အညှစ် အပြုသန်မှသန်။ အစစ်အမှန် မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ မလုပ်ဖူးသေး တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် သူမရဲ့ဒေါမာန်ပါပါ ဆောင့် ချက်များဟာ အမြန်ကို climax ရောက်စေခဲ့တာပေါ့။
'I... I'm sorry!' ကျွန်တော်အားနာပြီး တောင်းပန်စကားဆိုမိပါတယ်။ ကကွန်ဒုံးကိုအသာချွတ် ခပ်ဖြူဖြူအရည်တွေကို လက်နဲ့အသာ ကိုင်တွယ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို အပြုံးပဲပေးတယ် ကဲ့ရဲ့မှုမဆိုဘူး။
'First time withawoman?' သူမရဲ့ အမေးစကားသံမှာ နားလည်နေတဲ့ ခံစားမှုတွေပါသလိုပဲ။ အဲဒီ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်ငြိမ့်ပြမိရင်း 'ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဟိုလုပ်ဒီလုပ် ကစားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အတွင်းကျကျ ထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ် ဖူးဘူးဗျ။'
'ကောင်းပါတယ်၊ ငါတစ်ယောက်ယောက် ကျေနပ်သွားအောင်စွမ်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတာပေါ့'
'မစိုးရီမ်ပါနဲ့ နောက်အကြိမ်တွေမှာ မင်းဒီထက်စွမ်းလာမှာပါ'
Staci ကျွန်တော့် cum တွေကို ဒစ်ကနေ လျှာနဲ့လျက်ပြီးယူသလို ကွန်ဒုံးကဟာတွေကိုလည်း လက်ချောင်းတွေနဲ့ အသာယူတယ် သူ့ကြည့်ရတာ ၀ိုင်ရဲ့အရသာကိုမြည်းစမ်းနေသလိုပါပဲ။ ထို့နောက်မှာတော့ Ray ကိုနမ်းတယ်၊ ကျွန်တော့် cum တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ တခြားလက်ကို Ray ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုထည့်ရော။ ကလည်းသူမရဲ့လက်ချောင်းတွေ ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်မျိုတာများ...အိုး။
သုံးဦးသား ခဏတာအနားယူရင်း နေ့လည်စာစားကြတယ်။ သူတို့လင်မယားဟာ နေတာထိုင်တာ အတော်သပ်ရပ် တာပါ။ အစား အသောက်ချက်ပြုတ်ထားတာ၊ ထားသိုတာ၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေကိုကြည့် မြင်ရတာလေ။
Air-con လေအေးအေးက တဖြူးဖြူး စားသောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေကြောင့် ငိုက်မြည်းလာချိန် နို့တစ်ခွက် Ray ကယူလာပေးတော့ ယူသောက်လိုက်ရင်း မျက်စိတဖြည်းဖြည်းမှေးလာတာ ဘယ်အချိန်အိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိပါ။
Posted by Alex Aung at 6:50 PM No comments: